Waqtiyada Tareenka Tarsus Mersin iyo Qiimaha Tigidhada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean01 AdanaJadwalka Tareenka Tarsus Mersin iyo Qiimaha Tigidhada
01 / 12 / 2019 01 Adana, 33 Mersin, Coast Mediterranean, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, TURKEY
adana mersin waqtiyada tababarka
Jadwalka Tareenka Tarsus Mersin iyo Qiimaha Tigidhada: Adana waa khadka tareenka ee inta badan la isticmaalo inta udhaxeysa Mersin iyo Wadada Gobolka Mersin. Waqtiga Safarka Waxay qaadataa qiyaastii 45 daqiiqo. Xilliga xagaaga iyo jiilaalka, ayadoon loo eegin Ololaha Adana Mersin wuxuu bilaabmayaa 6:00 subaxnimo wuxuuna soconayaa ilaa 23:15. Tareenka ugu dambeeya ee u dhexeeya Adana iyo Mersin waa saacadda markay tahay 22:30. Saldhigga Tarsus waa xarun dhexdhexaad ah waana suurtagal in la tago Adana iyo Mersin labadaba.
Tarsus Mersin - Wadada Tareenka Tarsus Adana
Tareenka ka soo raacda Adana ilaa Mersin wuxuu qaataa ku dhawaad ​​1 saac iyo 10 daqiiqo. Tarsus Adana wuxuu qaataa ku dhawaad ​​30 daqiiqo, Tarsus Mersin wuxuu qaataa ku dhawaad ​​40 daqiiqo. Adana Mersin RAYBUS waxaa maalin walba shaqeeya Adana iyo Adana.
Qiimaha Tigidhada Tareenka Tarsus Mersin
Codsi dheeraad ah oo la xiriira tareenka u dhexeeya Mersin-Tarsus-Adana
Maanta ee Taariikhda: 15 Janawari 1883 Qandaraaska Mersin-Tarsus iyo heshiiska khaaska ah ee gudaha
Maanta taariikhda: 15 Janaayo 1883 Mersin-Tarsus ...
Maanta taariikhda: 4 May 1886 Mersin-Tarsus-Adana line ...